Lufthansa dia mampifandray ny fampiharana angon-drakitra momba ny fahasalamana amin'ny rojom-pitsangatsanganana nomerika
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Lufthansa dia mampifandray ny fampiharana angon-drakitra momba ny fahasalamana amin'ny rojom-pitsangatsanganana nomerika
Lufthansa dia nahatsapa dingana iray hafa tamin'ny famadihana nomerika ireo mari-pankasitrahana fanandramana, nanamora ny fivezivezena tamin'ny fotoanan'ny areti-mandringana
Fantatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny fanamarinana fanadinana nomerika CommonPass dia manamora ny fivezivezena amin'ny fotoanan'ny areti-mandringana
Azo atao ny fampiraisana amin'ny sidina rehetra avy any Frankfurt mankany Etazonia
Azo jerena mialoha ihany koa ny mari-pankasitrahana fanadinana nomerika alohan'ny sidina miverina rehetra avy any Palma de Mallorca mankany Alemana hatramin'ny 72 ora alohan'ny fiaingan'ny
Lufthansa dia manolotra tolotra vaovao ho an'ny dia any Etazonia: Ireo mpandeha izay efa nanao fitsapana COVID-19 natao tao amin'ny mpiara-miombon'antoka Lufthansa Centogene talohan'ny fiaingany dia afaka mahazo ny valin'ny fitsapana azon'izy ireo ao amin'ny fampiharana CommonPass eken'ny sehatra iraisam-pirenena. Mihatra amin'ny sidina Lufthansa rehetra avy any Frankfurt mankany Etazonia ary koa ny sidina feeder mifanaraka amin'ny alàlan'ny Frankfurt avy any Hamburg, Cologne, Berlin ary Düsseldorf.
Lufthansa dia mahatsapa dingana iray hafa amin'ny famadihana nomerika ireo mari-pankasitrahana fanandramana, manamora ny fivezivezena amin'ny fotoanan'ny areti-mandringana. Ho fanampin'ny fanamarinana nomerika vaovao, ny zotram-piaramanidina dia manome soso-kevitra ny hanohizan'ny vahininy hatrany ny mari-pahaizana vita pirinty tany aminy rehefa mandeha mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny.
Afaka misintona an-tsakany sy an-davany ny fampiharana amin'ny Android na IOS App Store ny mpanjifa ary avy eo mampakatra ny valim-panadinana ho any amin'ny app - taorian'ny nahazoany kaody fidirana avy any Lufthansa tamin'ny alàlan'ny mailaka 72 ora alohan'ny fiaingany. Ny fampiharana avy eo dia mampitaha ireo taratasy fanamarinana fitsapana miaraka amin'ireo fameperana fidirana manan-danja amin'izao fotoana izao any amin'ny firenena itodiana ary mamorona taratasy fanamarinana dia noho io antony io, raha toa ka antontan-taratasy fitsapana manan-kery ho an'ny toerana haleha izy io. Ny taratasy fanamarinana dia tsy mampiseho afa-tsy ny fampahalalana tena misy ifandraisany, toy ny valim-panadinana, ny fomba fitsapana, ny vanim-potoana manan-kery ary ny kaontera ora iray hatramin'ny fotoan'ny fitsapana, ary noho izany dia tsy mampiseho fampahalalana momba ny fahasalamana manokana. Ho fanampin'izany, ireo mpandeha Lufthansa izay mampiasa ny app CommonPass alohan'ny sidina mankany Etazonia dia hahazo fidirana malalaka mankany amin'ny Senator Lounge ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt eo anelanelan'ny 8 maraina sy 12:45 hariva.
CommonPass dia azo ampiasaina tsy amin'ny fidirana an-tsambo ihany, fa koa amin'ny fomba fiasa miampita orinasa. Ny sanda fanampiny ho an'ny mpandeha dia hohamafisina amin'ny zava-misy fa amin'ny ho avy ny orinasa hafa koa dia afaka mampiditra ny valin'ny fitsapana, toy ny efitrano fampisehoana na sinema. Ny porofon'ny vaksiny dia azo tehirizina ao amin'ny fampiharana amin'ny ho avy koa.
Fizahana mialoha ny mari-pankasitrahana fanadinana nomerika
Ny ankamaroan'ny Brits dia mankafy firenena maro kokoa izay mandray pasipaoro fanaovana vaksiny
Ny hetsika fifampiraharahana tamin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia nidina 3.8 isan-jato tamin'ny febroary 2021